किन बढ्न सकेन कांग्रेसको जनमत ? कसरी बढे वामपन्थी ?
काठमाडौं, पुस । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पछिल्लो निर्वाचनबाट वामपन्थी दलहरू झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राप्रपालगायत अनुदारवादी शक्ति बिलाउँदै गएका छन् भने मधेसी दल नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन्। ०१५ सालदेखि अहिलेसम्मका ७ निर्वाचनमा वामपन्थी वर्चस्व कसरी बढ्दै गयो र कांग्रेस किन खुम्चिँदै छ...
काँग्रेसलाई नै मत किन ?, हजार कारण छन, नजिकै विनोद चौधरीलाई हेरे पुग्छ : शोभाकर पराजुली
गौतमवुद्धपछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आज सम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु निष्कर्षमा टुंगिएका छन् । नेपालको आधुनिक इतिहास यता आजसम्म हाम्रो देश संक्रमणकालबाट नै गुज्रिरहेको छ ।...
शोभाकर पराजुली लेख्छन : “कम्युनिष्ट र रक्सी उस्तै हुन्”
काठमाडौ । कम्युनिष्टहरू एकदलीय सर्वसत्तावादको माध्यमद्वारा एउटै दलभित्रबाट न्याय हुने कल्पना गर्न आज पनि छोडिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रलाई नमान्नाको कारणले नै उनीहरूको पतन भएको हो । उनीहरूले रक्सीलाई जस्तै कम्युनिष्ट व्यवस्था वा परिपाटी नै ठानेका छन् । यो उदाहरणले कम्युनिष्टहरुका बारेमा बुझ्न र उनीहरु कसरी अपरिपक्व किसिमले वस्तुको विश्लेषण गर्दछन् भन्ने...
गत फाल्गुन १५ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुने आशा बोक्ने सन्देश प्राप्त भयो । पार्टी र पार्टी सभापतिहरु स्वार्थ र राजनीतिको खेलबाट माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हाल बिशेषज्ञ तहको अर्थमन्त्री नियुक्तिले असत्य गरिदिएको छ । १४ बर्षसम्म जेल नेल खेपेर...
नेपाल भारत सम्बन्ध : प्याज जस्तै
नेपाल भारत सम्बन्ध प्याजजस्तो पत्रपत्रमा निर्मित छ भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र साँस्कृतिक पत्रहरू। यी पत्रहरू ‘प्याज’ मा झैं एक अर्कामा खप्टिएका छन्। सम्बन्धको अत्यधिक नजिकको खप्ट्याई कहिलेकहीँ सुविधाको कारण बन्छ, अनि कहिलेकहीँ...
कांग्रेसबारे एउटा सौर्य कल्पना
- चन्द्र महर्जन कार्यालय खचाखच नेपाली कांग्रेसको कार्र्यालय प्राय सुनसान नै रहने गरेको थियो । आक्कल झुक्कल बाहेक पदाधिकारी, केन्द्रिय नेता कोही कार्यालयमा हुँदैन थिए । कार्यकर्ताले भेटन परे उनका घर नै धाउनु पथ्र्याे । तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो हुने...
शोभाकर पराजुलीले राखे : काँग्रेसका होनहार सात नेतालाई पाँच प्रश्न
काठमाडौं, १८ पुस । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्बाचनमा काँग्रेसले ब्यहोरेको हारले यतिबेला नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनदेखि शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता दबाबका चर्चा बढ्नथालेका छन् । काँग्रेसका सात होनहार नेताहरुले यसलाई विशेष मुद्धा नै बनाएका छन्...
काठमाडौं । पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाए पनि एमाले(माओवादी केन्द्रले आफ्ना शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेगरी नयाँ सांगठनिक प्रारूप अझै तयार गर्न सकेका छैनन् ।दुवै अध्यक्ष तहमा पार्टी एकतापछि नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सघन छलफल...
काठमाडौं, पुस । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पछिल्लो निर्वाचनबाट वामपन्थी दलहरू झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राप्रपालगायत अनुदारवादी शक्ति बिलाउँदै गएका छन् भने मधेसी दल नयाँ शक्तिको...
गौतमवुद्धपछि सबैभन्दा बढि अक्षरहरुद्वारा चर्चित नेपाली विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अठोट, दुरदर्शिता, संगठन र नेतृत्वद्वारा स्थापित नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता लगायत आज सम्मका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरु...
काठमाडौ । कम्युनिष्टहरू एकदलीय सर्वसत्तावादको माध्यमद्वारा एउटै दलभित्रबाट न्याय हुने कल्पना गर्न आज पनि छोडिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रलाई नमान्नाको कारणले नै उनीहरूको पतन भएको हो । उनीहरूले रक्सीलाई जस्तै कम्युनिष्ट व्यवस्था वा परिपाटी नै ठानेका छन्...
एमालेकै नेताले देखेको एमालेका २४ राष्ट्रघाती अपराधहरू
काठमाडौं । वाम गठबन्धनको रमिते उत्सवमा रमाई रहेको नेकपा एमाले अहिले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुने दिवास्वप्न देख्दै सत्ता रसास्वादनको बाक्लो र्‍याल काढेर बसेको छ । यो बामपन्थी गठबन्धनको नैतिक, व्यवहारिक र शैद्धान्तिक आधार के हो रु भन्नेबारे नेकपा...
नेपालमा कम्युनिष्टको डिजार्इन : पहिले संस्कृत सिध्याए, अब संस्कृतिको पालो
काठमाडौं । नेपालमै कुनै समय यस्तो पनि थियो । जुन समयमा नेपालका प्रत्येक विद्यालयहरुमा संस्कृतको ज्ञान दिईन्थ्यो । ुअईउण् ऋलृक्।।।ु का शब्दहरुले विद्यार्थीहरु खारिन्थे त शास्त्र पढ्नको लागि मात्रै नभएर स्तरीय नेपाली भाषाको लागि पनि संस्कृतले टेको...